Otu Onye Anwụọla n'Ihe Mberede Okporoụzọ n'Anambra - Igbo News | News in Igbo Language
Sep 2, 2021 - 16:13
Dịka o siri kọwaa, ya bụ ihe mberede okporoụzọ dapụtàrà na mpaghara Nteje, dị nso na njikọ ụzọ Awkụzụ, n'ogologo ụzọ awara-awara ahụ siri Enugu gaa Onitsha, ma bụrụkwa nke mere ka oge o jiri nkeji iri abụọ na anọ gata elekere iri na abụọ nke ụbọchị Tuzdee.
O kwuru na ya bụ ihe mberede okporoụzọ dapụtara n'etiti onye na-anyà nnukwu ụgbọala 'Mercedes 911' (nwere akàrà GDD630XA), bụ Maazị Ikenna Ozonwadinkpa, nà onye na-anya ọgbatumtum Jencheng (nwere akàrà ZLL 108 QU), bụ onye a maghị onye ọ bụ.
DRC Onabe gara n'ihu mee ka a mara na ihe mberede okporoụzọ ahụ mètụtàrà mmadụ ise, nke gụnyere ụmụnwoke anọ na otu nwaanyị, ma kwukwa na otu nwoke n'ime ha nwụrụ, ebe otu nwaanyị ahụ nwetara ihe mmerụahụ n'ihe mberede okporoụzọ ahụ.
Dịka o siri kọwaa, ọ bụ ịgba oke ọsọ ka e kwuru na ọ bụ ya kpatara ihe mberede okporoụzọ ahụ. Ọ sị na ndị ọnọmgbeomere kwuru na onye ọgbatumtim ahụ nọ n'oke ọsọ, chọọ iji ọsọ wee gbafere nnukwu ụgbọala ahụ, wee dànyeziere ya adanyere, kpọrikọọ onwe ya.
E burukwazịrị ndị ahụ ihe mberede ahụ metụtara wee gaa ụlọọgwụ 'CHIRA Hospital' dị nso n'ebe ahụ, bụ ebe dọkịta nọrọ wee lelechaa ha ahụ ma gbaa akaebe na otu nwoke n'ime ha, bụ onye ahụ na-anyà ọgbatumtum anwụọla. A dọnyezịkwara ozu ya n'ụlọ nchekwa ozu dị n'ụlọọgwụ ahụ, ebe ndị ọrụ FRSC gbakwazịrị mbọ bupusie ihe dachisiri ụzọ, iji gbochie inwe agbakata akwụrụ n'ebe ahụ.
O kwuru na ọ bụ ịgba oke ọsọ na-ewetakarị ọkà n'ọnụọgụgụ ihe mberede okporo ụzọ na-adapụta aghara aghara na mpaghara ebe dị iche iche steeti ahụ. O chètààrà ha na oji nwanyọ anaghị emerụ ahụ, ma dụọ ha ka ha zèére ịgba oke ọsọ, ọkachasị ugbua a na-achọkwa ịbànye na mmemme ekeresimeesi koọmkwem.